March | 2016 | Radio Himilo
Daawo Sawirrada: Xulka Qaranka Soomaaliya oo u duulay Itoobiya
radio himilo March 30, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 107 Views
Xulka qaranka labaatan jirada Soomaaliya ayaa maanta ka anbabaxay gegada Aden Cadde si ay u gaaraan dalka Itoobiya oo ay ku soo dheeli doonaan kulan ka tirsan isreebreebka qaramada Afrika ee labaatan jirada. Cayaartoy da’yar oo badan ayaa qaranka metelaya ...
Hordhaca kulanka ay wada dheelayaan Heegan iyo Gaadiidka
radio himilo March 29, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 60 Views
Kooxaha kubadda cagta Heegan iyo Gaadiidka ayaa kulan xiiso badan ku balansan galabta gegada Banaadir Stadium. Heegan waa kooxda horyaalka daafacaneysa, waxayna dooneysaa inay guul ka gaarto dhigeeda Gaadiidka. Heegan ayaana ku riyaaqeysa guushii taariikhiga aheyd oo toddobaadkii tegay ay ...
Elman oo ku durdurisay dhigeeda Signjet kulan horyaalka Soomaaliya ka tirsanaa
radio himilo March 29, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 77 Views
kooxda kubadda cagta Elman ayaa si awood ku dheehan tahay dhabanada ugu dhufatay dhigeeda Signjet oo kulan horyaalka Soomaaliya ka tirsan ay ku wada dheeleen gegada Banaadir Stadium. Goolal ka kala yimid Axmed Dahir Baariyoow iyo C/laahi Nur Agoogo ayay ...
West Ham oo dooneysa inay ku guuleysato saxiixa Ibrahimovic
radio himilo March 28, 2016	Xulka cayaaraha Leave a comment 67 Views
Sida uu sheegtay madaxa kooxda West Ham David Sullivan waxay indhaha ku hayaan sidii ay dhamaadka xagaaga ula soo saxiixan lahaayeen weeraryahanka PSG Zlatan Ibrahimovc. Ibrahimovic ayaa isaga tegi doono PSG marka dhammaadka xagaaga uu soo idlaado qandaraaska uu kula ...
Elman iyo Signjet oo galabta ku balansan horyaalka Soomaaliya
radio himilo March 28, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 59 Views
Kulan xiiso badan oo ka tirsan horyaalka heerka koowaad ayaa galabta gegada Banaadir Stadium ku dhexmari doona kooxaha Elman iyo Signjet. Labadan kooxood ayaa indhaha ku haya sidii ay guulo u gaari lahaayeen oo dhibcaha kulanka galabta ay u heli ...
radio himilo March 28, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 80 Views
kulankii 4aad oo horyaalka heerka labaad ayaa lagu dheelay gegada Banaadir Stadium markii ay fooda isdareen kooxaha Somali Fruit iyo Gantaalaha Afgooye. Cayaarta oo mid hal dhinac ah u muuqatay waxaa gool dhallinta bilaabay daqiiqaddii saddexaadba cayaartoyga lanbarka siddeedaad u ...
Tababaraha Uruguay oo la dhacsan weeraryahankiisa Luis Suarez
radio himilo March 26, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 47 Views
Tababaraha qaranka Uruguay Oscar Tabarez ayaa ku tilmaamay qaramada Latin Amerika inaanay heysan cayaaryahan u dhigma Luis Suarez. Uruguay ayuu dib ugu soo laabtay Suarez isagoo ganaax ku maqnaa tan iyo koobkii adduunka, markaas oo uu qaniinay Giorgio Chiellini. Kulankii Brazil ay ...
Daawo Sawiradda: Garsoorayaal Soomaaliyeed oo dhexdhexaadiyay kulan uu goob joog ka ahaa madaxweynaha FIFA
radio himilo March 26, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 83 Views
Gabon ayaa galbeedka dalkeeda gegada ku taal ku soo dhaweysay Sierra Leone oo ay ku tartamayeen isreebreebka koobka qaramada Afrika. Cayaartan waxaa u soo daawasho tegay oo gegada FranceVille ku sugnaa madaxweynaha Gabon Ali Bongo Ondimba, Madaxweynaha cusub ee FIFA Gianni Infantino iyo ...
Horseed oo guul dirqi ah ka gaartay FC Muqdisho
radio himilo March 26, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 70 Views
Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa kulan xiiso badan la dheeshay dhigeeda FC Muqdisho oo ay isku arkeen kulamadda 13aad ee horyaalka Soomaaliya. Cayaarta ayaa ku bilaabatay qaab weerar iyo weerar celis ku dhisan, iyadoo labada kooxood ay u muuqdeen kuwo ...
Banaadir FC oo la cayaari doonta Al Beder
radio himilo March 26, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 44 Views
Si habsami la’ toddobaad bilowgan waxaa gegada Banaadir Stadium looga cayaari doonaa horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya. Inkastoo Isniin ilaa Jimco la dheelo horyaalka heerka koowaad, maalmaha Sabtida iyo Axadda waxaa la cayaari doonaa horyaalka heerka labaad. Horyaalka heerka labaad ...